China na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na-acha ọcha akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ China na ndị na-ebu ngwaahịa | Yiruihe
Nwanyị Na-acha Anya Mkpịsị Shekwụ Atụrụ
Agba na-egbuke egbuke ga-ewerekwu "agba" na oge oyi. Vardị na-egbukepụ egbukepụ dị iche iche ga-eme ka onye nwe ya nwekwuo nhọrọ. Yi & Ọkụ, Ọ nwere ike ibikọ ọnụ.
Nke elu: Atụrụ
Azụ: TPR （roba naanị）
Size iche: # 3-8 maka UK size / # 36-41 maka Euro Size / # 5-10 maka nha USA
A Level & lining & insole ka A Level Australian Sheepkin mere.
Ihe eji eme akwa atụrụ bu iru REACH （Europe Standard） & United States California 65 ọkọlọtọ （American Standard）.
Ọnọdụ dị mma ： Maka ime ụlọ.
Mgbe ị rụsịrị ọrụ ụbọchị siri ike, slippers akpụkpọ anụ atụrụ dị nro, nke dị mma bụ ụzọ kachasị mma iji zuru ike. Eke ajị anụ, nke dị mma ma na-eku ume, Ọ ga-enye ụkwụ gị ezumike zuru oke site na ikiri ụkwụ dị elu na ihe ndị aka. Ylọ ọrụ Yirui United na-eji ajị atụrụ atụrụ atụbata nke Australia bụ otu n'ime mmepụta nke slippers ajị anụ bụ nhọrọ kachasị mma gị.
Nwanyị a na-acha atụrụ atụrụ na-acha uhie uhie nke Lady A na-eme nke sitere na Australian A-class Sheepskin na elu na linings. Ọ dị oke mma ma ọ ga - eme ka ụkwụ gị dị ọkụ ma nwee ntụsara ahụ n'oge niile. Ma ị na - arụ ọrụ n'ụlọ ma ọ bụ na - eburu ozi, ụdị slippers a ga - eme ka ahụ dị gị mma na nkụ. Ezigbo, akwa, akwa Australian Atụrụ na-agbacha agbacha ụkwụ ụkwụ ma na-agbada ọbụna n'etiti mkpịsị ụkwụ, nke na-adịghị na ihe ọ bụla ọzọ na kemịkal kemịkalụ. O doro anya na ọ bụ nhọrọ mbụ maka ụmụ nwanyị na-eji ejiji oge oyi akwa n'ime slippers.
Na akpụkpọ anụ atụrụ bụ hygroscopic na ọ dị mma ọbụlagodi na oge okpomọkụ nke mmiri iji mee ka ụkwụ gị dị ọhụrụ ma kpọọ nkụ n'oge niile. Nke a bụ n'ihi na eriri eriri dị n'etiti ajị atụrụ, nke na-eme ka ọnọdụ okpomọkụ na-agbanwe agbanwe n'ime afọ niile, ọ na-enyekwa aka igbochi ụlọ ahụ ịjụ oke oyi, dịka ọmụmaatụ, mgbe igwe ikuku na-arụ ọrụ n'oge ọkọchị.
Naanị ya bụ roba, mgbochi ịmịcha na akwa na-eguzogide, na-eme ka ọ dị mfe ma dịkwa mma iji eyi.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ mmadụ na-ahọrọ ihe ịchọ mma dị oke ọnụ, otu slippers ajị anụ nwere ike igosi ezigbo ụtọ mmadụ.
Slippers nke atụrụ na-abụkwa onyinye zuru oke iji zipu ịhụnanya na-ekpo ọkụ n’ebe ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị nọ.
Nke gara aga: Lady kpochapụwo Cuff ajị atụrụ Slipper
Osote: Nwanyị Nwanyị Na-acha Tokwụ Shekwụ Atụrụ
Lady keagwaraogwa Agba Open Mkpịsị Shekwụ Atụrụ
Umu nwoke achuru aturu Moccasins
Closemụ nwoke Akara Akpụkpọ anụ Ajị anụ
Lady Cuff Atụrụ atụrụ